लक्ष्मी पुजाको दिन यी ९ राशिलाई मिल्यो लक्ष्मीको कृपा: राशिफल/२०७५ कार्तिक २१ गते बुधबार -सेयर गरौ « Janaboli
लक्ष्मी पुजाको दिन यी ९ राशिलाई मिल्यो लक्ष्मीको कृपा: राशिफल/२०७५ कार्तिक २१ गते बुधबार -सेयर गरौ
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – सर–सफाई गर्न मन होला । बिग्रेको कुरालाई सुधार्न सकिएला । मठ मन्दिर जान पाइएला वा जान पौने कुरा होला । पराक्रमद्वारा असाद्द्य कामहरु पनि बन्ला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा दौडधुप अलि होला । केही चुनौती देखिए पनि मन भएजति पुरा गर्न नसक्ने नहोला । रोगलाइ दबाउन सकिएला । स्वास्थ्य बिस्तारै राम्रो होला । विश्वास पात्र कोहि नभए पनि मान्यजनको सुझावलाइ गहिरो गरि लिएर चिन्तन मनन गरि महत्वपूर्ण काममा अघि बढ्नु होला । काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । तपाइको रासी मेस हो जुन मंगल ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले मंगल ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – कुनै संघ संस्था खोलौ भन्ने वा कुनै काम अघि बढाउ भन्ने हुने । अलि कति रमाइलो वा खुसियाली जस्तो बढ्ने । रोजगारीको लागि व्यवस्थित बनौँ भन्ने हुने । दिनचर्यामा नयाँ हौसला र जोश होला । प्रगतिशील विचार आउने छ । यात्रा गर्ने अवसर बढेर आएको देखिन्छ । जसको पनि सहजै साथ पाईएला । अरु मान्छे संग मिलि गर्नु पर्ने काम आउला । यदि सम्मानको अरु सामु पेस आएका काम बन्ला नभए अलि गाह्रो हुन सक्ला । जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ । तपाइको रासी बृष हो जुन शुक्र ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले शुक्र ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – मेहनत गर्दा मात्र अलि बढी सफल होला । जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ । अर्थात् दैनिकी कामहरु बढेर आउने हुन्छ । व्यावहारिक अलमलले काममा बाधा ल्याउला । आँटेको काममा अलि ढिलाई होला । अरूको मुख नताक्नु होला । व्यवसायको सन्दर्भमा सुभ देखिन्छ । प्रतिकुल स्थिति आउन सक्ने हुन्छ । पराक्रमद्वारा असाद्द्य कामहरु पनि बन्ला । अवसरको खोजीमा भौतारिनु पर्ला । अरुले त्यतिकै फसाउन सक्छन् । यसो कतै जाने मन नहुने होला । बिहान देखि कामको अलमल हुनेछ । तपाइको रासी मिथुन हो जुन बुद्ध ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले बुद्धलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – दिन मंगलमय हुने छ । बारम्बार आवत–जावत गरिरहनु पर्ने बनाइदेला । भाइ बहिनीहरुसँग पुर्नमिलन हुने जस्तो देखिन्छ । सानो होस् या ठुलो होस् सम्मान पौने छ । मनोबल बढ्नेछ । घर परिवारमा सबैलाई माया बाँड्न पाउने छ । बिबाह आदि पर्व होला । अध्ययनको लगावले अलि बढी पढाई लेखाइमा लाभ होला तर केहि अबरोध पनि आउनेछ, बुद्धि लागे समय मिलाउनु होला । मनमा भएजति यात्राको फाइदा उठाउने समय छ । तपाइको रासी कर्कट हो जुन चन्द्रमाको रासी हो त्यसैले तपाईले चन्द्रमालाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – भान्छामा काम धेरै बढेर जाला । मिठो मिठो खाना मन होला । ब्यापारीहरुको लागि राम्रो छ । बैक आदिको काम गर्नु पर्ला । व्यवसायको सन्दर्भमा सुभ देखिन्छ । अनुकुल स्थिति आउन सक्ने हुन्छ । कृषिकर्म आदि काममा मनग्गे लाभ हुनेछ । व्यावसायिक काममा मनग्गे लाभ हुनेछ । व्यापार लगायत अनि क्षेत्त्रमा राम्रो देखिन्छ । रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ । हिसाबकिताबमा विवाद आउन सक्छ । थोरै लाभको मात्र सम्भावना देखिन्छ । तपाइको रासी सिंह हो जुन सुर्यको रासी हो त्यसैले तपाईले सुर्यलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – निश्कर्ष निकाली निर्णय गर्नमा ढिला होला । व्यतिको प्रभाव अलि फिका हुँदा सबलाई अकर्षण पार्न अलि मेहनत गर्नु पर्नेछ । जो कोहि पनि व्यक्ति संग खुसि होला आजको दिन र आफुनै अलि दोधारमा होला । गृहस्ती जीवन राम्रो होला । घर–परिवार–सन्तान आदिबाट लाभ देखीन्छ । कार्यक्रम आयोजनामा सहभागी हुन पाउला । नया काम वा मान्छे फेला पर्न सक्छ त्यसैले सानो ठुलो जस्तो मान्छे होस् या रोजगार होस् त्यसलाइ द्वेस नराख्नु होला । चुनौती पन्छाउँदै अघि बढ्न सजिलो हुनेछ । जे बुद्धिमा आयो त्यहि बोलि फुट्न सक्छ । जोगिनु होला । असाद्द्य पराक्रमद्वारा मात्र सामान्य कामहरु पनि बन्ला । तपाइको रासी कन्या हो जुन बुद्ध ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले बुद्धलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – काम कुरा आदिलाई छिटो सकाउनु पर्ने दबाब आउन सक्छ । बिरामी हुन सक्ला, जे पायो त्यही नखानु होला । गर्नु पर्ने धेरै काम गर्न सकिएला । पराक्रमद्वारा असाद्द्य कामहरु पनि बन्ला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्र राम्रो देखिन्छ । किनमेलमा मन जानेछ । केही चुनौती देखिए पनि मन भएजति पुरा गर्न नसक्ने नहोला । नौलो नौलो परिस्थितीहरु आउला । कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्दै जानु पर्नेछ । यदि नसुधारे अफ्फैलाई गाह्रो होला । सुझावले गर्दा फाइदा हुनेछ । तपाइको रासी तुला हो जुन शुक्र ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले शुक्र ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – प्रियजनको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ । सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ । श्रमको मूल्यांकन होला । सहयोग गर्नेहरू भेटिनेछन् । लगनशीलताले सफलता दिलाउनेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुने समय छ । बिना तयारी घुमफिर गर्नु पर्ला । त्यस्तै खाले समय आएको छ । तत्कालै फाइदा नभय पनि फाइदा हुने कामहरु भने प्राप्त हुन सक्छ । यदि सम्मानको अरु सामु पेस आएजति काम बन्ला नभए अलि गाह्रो हुन सक्ला । काममा सहयोग जुट्नाले उत्साह मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् । तपाइको रासी बृश्चिक हो जुन मंगल ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले मंगल ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – मांगलिक काम कुराहरु बढेर आउने जस्तो देखिन्छ । बिबिद संघ संस्थामा चहारिनु पर्नेछ, अर्थात् संस्थागत कामहरुमा अभिवृद्धि हुनेछ । आफ्नो कर्तब्य पालना गर्नु पर्ने अवसर आएको छ । व्यावहारिक अलमलले काममा बाधा ल्याउला । छिमेक तिर वा टोल तिर अलि राम्रो भएको देख्न सकिएला । रोजगारबाट टाढिनुपर्ला । घर बाहिर खाना जान पाउला । अर्कै किसिमको खुसियाली होला । धेरै उपलाधि यदि भए पनि ,केहि भएपनि उपलब्धिको कारण खुशी होला । तपाइको रासी धनु हो जुन बृहस्पति ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले बृहस्पति ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – भाइ बहिनिहरु संग पुर्नमिलन हुने जस्तो देखिन्छ । ठुलो ठुलो काममा भन्दा सानोमा मन होला । रोकिएका काम केहि भएपनि बनाउन सकिनेछ । काम रोकिनाले मन खिन्न हुनेछ तर चिन्ता नगर्नु होला फेरी सुचारु हुनेछ । हजुर बुवा–हजुर आमा आदि केहि समय बाहिर जालान । धर्म कर्म, दान पुन्य गर्न सकिएला । उच्च शिक्षाको लागि तयारी गर्न सकिएला । बक्सिङ्ग, फुटबल, तेबल–टेनिस, आदि जस्ता खेलहरुमा रुचि भइ आउला । आफुले एक पटक साथ दिएको व्यक्तिको उन्नति आदि देखि खुसि हुन पाउला । तपाइको रासी मकर हो जुन सनी ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले सनी ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – अरूको मुख नताक्नु होला । ब्यापारीहरुको लागि राम्रो छ । अरुले त्यतिकै फसाउन सक्छन् । व्यावसायिक काममा मनग्गे लाभ हुनेछ । आकस्मिक खर्च बढ्नाले मनमा चोट लाग्ला । बोल्ने बानीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुहोला । मिठो मिठो खाना मन होला । बोल्ने बानीले दुःख पाइनेछ । मेहनतले आम्दानी बढाउनेछ । केही संघर्ष गर्नुपर्ला । खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ । रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ । योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । केही संघर्ष गर्नुपरे पनि हतास नहुनु होला । तपाइको रासी कुम्भ हो जुन सनी ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले सनी ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – तन्दुरुस्तता आउनेछ, फुर्ति र चुस्ती आउनेछ । लगनशील भएर कुनै काम कुरामा लाग्न सक्ने छ जसले सफलता दिलाउनेछ । चाजो बाजो मिलाउनु पर्ने समय छ । रोकिएका काम धेरै नभएपनि सक्ने जति बनाउन सकिनेछ । मोज मस्ती आदि गर्नलाइ आकर्षित गर्ला । जिम्मेवारी बढिरहनेछन् तर निभाउनै पर्ने जस्तो हुन्दैन । धेरै जोश र जागरले भरिभराउ होला । फाइदा हुने काम प्राप्त हुन सक्छ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ । तपाइको रासी मिन हो जुन बृहस्पति ग्रहको रासी हो त्यसैले तपाईले बृहस्पति ग्रहलाइ मान्दा राम्रो हुन्छ ।
सूर्य दक्षिणायन हुँदा यी राशिमा यस्तो प्रभाव : राशिफल/२०७७ साउन २८ गते बुधबार
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल साउन २८ गते बुधबार ई. सं. २०२० अगस्त १२, नेपाल सम्बत
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल साउन २६ गते सोमबार ई. सं. २०२० अगस्त १०, नेपाल सम्बत
चन्द्रमा मीन राशिमा गोचर हुँदा आजदेखि यी राशिको भाग्य चम्कियो : राशिफल ०७७ साउन २५ गते आइतबार
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल साउन २५ गते आइतबार ई. सं. २०२० अगस्त ९, नेपाल सम्बत
भोलीदेखि सूर्य दक्षिणायन : जान्नुहोस् कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव/राशिफल ०७७ साउन २४ शनिबार
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल साउन २४ गते शनिबार ई. सं. २०२० अगस्त ८, नेपाल सम्बत